Sida looga joojiyo rukunkaaga iPhone, iPad ama iTunes | Wararka IPhone
Ciise gooyaa | | Casharrada iyo buugaagta
Waa wax aad u badan maanta in midkeen kastaaba uu leeyahay ugu yaraan hal firfircoon rukumo codsi ama joornaal dijitaal ah. Codsiyo aad iyo aad u tiro badan ayaa dooranaya a Adeeg Freemium iyaga ka mid ah, si ay faa'iido uga helaan shaqooyinkooda. Waxaa macquul ah inaadan isticmaalin codsigan aad bil walba bixiso oo aad ubaahan tahay inaad kansasho, kadib waxaan kuusoo bandhigi doonaa sida loo sameeyo laba qaab oo kala duwan.
Markaan ka hadleyno barnaamijyada ama ciyaaraha Freemium, sidee ayuu Nintendo noqon doonaa, Waxaan tixraaceynaa kuwa aan si buuxda u soo dejisan karno free ka dukaanka App oo u isticmaal si caadi ah laakiin sidoo kale waxay bixiyaan adeegyo taxane ah ama hagaajin u baahan a bixinta bil kasta ama sanadle ah.
Haddii aan ka hadalno diiwaangelinta billaha ah waa wax aad u suurtagal ah, runtiina badankood waa sidaas oo kale, in qiimo jaban aad leedahay oo aanan ogeyn inay lacag naga qaadayaan. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in marba marka ka dambeysa aan dib u eegno dhammaan diiwaangelinta aan ku leenahay firfircooni si looga fogaado in nalagu soo dallaco wax aanan sii isticmaalin ama aanan rabin.
Waxaan haysanaa dhowr ikhtiyaar oo aan ku eegi karno oo aan kansul u noqon karno rukhsadeynteenna, mid ayaa ka yimid qalabkeenna macruufka ah, iPhone ama iPad, ama ikhtiyaarka labaad ayaa ah in laga sameeyo iTunes.
1 Ka noqo rukummada iPhone ama iPad
2 Ka noqo rukummada iTunes
Ka noqo rukummada iPhone ama iPad
Sida iska cad, waxa ugu horeeya ayaa noqon doona in wax laga qabto «goobaha»Qalabkayaga.
Marka xigta, waa inaan galno qaybta «iTunes iyo App Store»Markaana halkaa, waxaan galnay kuweenna Aqoonsiga Apple. Na weydiin doonaa gal si loo xaqiijiyo marin u helka.
Marka aan gudaha galno, waxaan raadineynaa ikhtiyaarka «Macaamiisha»Waana galnay. Liistu waa inay la muuqataa mid kasta oo ka mid ah rukhsadaha firfircoon ee aan hayno.
Waa markiisa joojiso midka aynaan rabin. Guji dushiisa oo waxaan galeynaa inaan aragno faahfaahinta rukunka, nooca rukunka, qiimaha iyo ikhtiyaarka ah Iska qor.
Haddii aan riixno badhan, farriin digniin ah ayaa soo muuqan doonta si loo xaqiijiyo in aan dooneyno baajiso rukunka la yiri. Kaliya markaan xaqiijinayo, waan dhameystiri doonnaa hawsha. Isha, the rukummadu ma dhammaanayso markaan tirtirno, taasi waa, haddii loo qorsheeyay in dib loo cusbooneysiiyo 30-ka maantana ay tahay 15-ka, waan ku raaxeysan doonnaa adeegyadeeda illaa maalinta ay tahay in la cusbooneysiiyo.
Ka noqo rukummada iTunes
Markaad kujirto arjiga iTunes, mid ka mid ah kombuyuutar ama Mac, waa inaan tagnaa, liiska, xulashada «Account -> Eeg koontadayda«.
Waxay na weydiin doontaa inaan qorno password of our Aqoonsiga Apple ka dibna waxaan arki doonaa dhammaan xogta tan.
Waxaa ka mid ah qaybaha kala duwan ee muuqda, ku dhowaad dhammaadka, qeybta ku taal goobaha, ikhtiyaarka «Macaamiisha»Iyo agtiisa badhan loogu talagalay«Maaree«.
Markaad gudaha gasho, waxaan arki doonaa liiska oo dhan rukhsado firfircoon oo dhacay in aan la xiriirnay Aqoonsigeenna Apple. Haddii aan gujinoIsbedel»Waan arki karnaa faahfaahintiisa waana joojin karnaa midka aan dooneyno.
Waxaan kugula talineynaa in waqti ka waqti aad sameyso a dib u eegista rukummadaada, maadaama sidaan horay u idhi, ay badanaa yihiin Qiimo aad u hooseeya in aynaan garaneyn laakiin waxay naga qaadaan bil kasta ama sanad kasta oo dhaafta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida looga joojiyo rukunkaaga iPhone, iPad ama iTunes
Waxaan rabaa inaan ka noqdo rukumashadayda iTunes, taas oo aanan sameyn, waxay qaateen taleefankayga, waxaan jeclaan lahaa inaan baajiyo, ma isticmaalo
Ku jawaab Mara garcia
Adigu waad si fiican iigu sharaxday, mahadnaqa boggan waxaan awooday inaan ka baxo rukunka. Mahadsanid.
Ku jawaab Benigno Marín Calvo
Codsigan waxaad ku isticmaali kartaa Kaaliyaha Google ee casrigaaga Android iyo AirPods